Ngokungezwani nokushisa kwembulunga yonke isibhakabhaka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Eminyakeni yamuva nje besilokhu sifakaza ngokwengeziwe ihlobo futhi lifudumele. Kwesinye isikhathi singaba nomuzwa wokuthi izinkathi zonyaka zihlanganisiwe, kuze kufike ezingeni lokuthi, ikakhulukazi esifundeni saseMedithera, igama elithi veroño laqanjwa esikhathini esedlule. Lolu shintsho luzobakhanga impela labo abangabujabuleli nakancane ubusika, kodwa kubangela ukungakhululeki okuningi kwabaguliswa ukungezwani komzimba.
Izitshalo, ezinesimo sezulu esihle kangaka futhi amasonto amaningi, zisebenzisa futhi ziyachuma. Ngokwenza kanjalo, umoya uhamba nempova eningi. Enye yaleyo mpova, njengoba sifuna ukuyigwema, iphelela ngaphakathi kwamakhala omuntu. Futhi ezinye zazo zibucayi kakhulu. Okubuhlungu ngakho konke lokhu ukuthi ngenxa yesivuvujikelele, ukungezwani komzimba kuzokwenyuka kuphela.
Yize kunjalo, ukwanda kwamazinga okushisa akubanga kuphela. Isomiso nokungcola kuyingxenye enkulu yenkinga. Ngokusho Ingelosi Yokuziphatha, UMongameli we-Aerobiology Committee ye-Spanish Society of Allergology and Clinical Immunology (Seaic) kanye nodokotela abenza izinto ezingezwani komzimba eToledo Hospital Complex, »kunobudlelwano obuqondile phakathi kokungcola kwemvelo kanye nokwanda kwezimo zokungezwani komzimba nokuphefumula. Amaphesenti asuswe ekushiseni kwenjini yedizili nasekushiseni enza indawo enobutha yezitshalo. Ukuze bazivikele, bakhiqiza amaprotheni enza impova ibe nolaka ngokwengeziwe.
Amazinga okushisa aphakeme andisa izikhathi zokuvundisa impova, ngakho-ke i-rhinitis ayisekho isikhathi sonyaka. Kepha kusekhona okunye: ngoba lina kancane kancane, izinhlobo zezitshalo ezibuthakathaka ziyanyamalala. Ngokwenza njalo, imithi emelana kakhulu, nayo okuyiyona edala ukungezwani komzimba nomzimba, njenge-salsola, okuwumuthi ovame kakhulu emiseleni nasemapulazini, iyawabeka esikhundleni sawo.
Ngabe kukhona okungenziwa ukunciphisa umthelela walokhu kwanda komzimba? Vele: tshala izihlahla ezingenakho ukungezwani komzimba, vimbela ithrafikhi futhi ungangcolisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngokufudumala komhlaba, ukungezwani komzimba kuyanda